Ukuzinza - UKUPHAKWA KWAMANQAKU NGOKUPHELELEYO NOKUprinta, LTD
Sizimisele ukuqhuba ishishini elizinzileyo ukuhambisa izibonelelo ezihlala ixesha elide kubasebenzi bethu, abathengi, uluntu olungqongileyo kunye nokusingqongileyo. Sisoloko siphucula amaziko ethu okwenza imveliso ukwandisa ukwanda kwamandla kunye nokunciphisa indawo yethu yekhabhoni.
Imitha yethu yozinzo
● Ukunciphisa ukusetyenziswa kwamanzi ngokupheleleyo nge-19% ngonyaka wama-2014-15 ukusuka kunyaka-mali odlulileyo
● Ukunciphisa inkunkuma yethu eyingozi kwindawo yokulahla inkunkuma ngama-80% ngonyaka wama-2014-15 ukusuka kunyaka-mali odlulileyo
● Ubume obuzinzileyo 'bokulahlwa okungamanzi' kwindawo leyo
● Ukucutha ukukhutshwa kwegesi eluhlaza ngokuhlangabezana nama-95% emfuno zethu zamandla ngombane ococekileyo oveliswe kwindlu yethu yendlu yombane yerhasi yendalo.
● Ukunyuka kwamanqanaba omhlaba kwindawo yethu ngokusebenza kwakhona nangokubuyisela amanzi kumhlaba wenkqubo yokuvuna amanzi emvula
Indalo esingqongileyo, iMpilo & noKhuseleko (EHS)
Ukhuseleko lweNdawo yokuSebenza
Indlela yethu yoKhuseleko lokuqala iqhutywa ngumgaqo-nkqubo we-EHS, iinjongo, isicwangciso samanyathelo nezicwangciso kulawulo lokhuseleko. Imisebenzi yethu yokusebenza ihambelana ne-OHSAS 18001: 2007 inkqubo yolawulo. Silinciphisile iRekhodi-yeNqanaba lokuRekhoda nge-46% ngonyaka wama-2014-15 ukusuka kunyaka-mali odlulileyo.
Imisebenzi yokhuseleko emlilweni igcinelwa ukukhusela ubomi kunye nokunciphisa umngcipheko wokonzakala kunye nokonakaliswa kwepropathi emlilweni. Indawo yethu yokuvelisa kunye nezixhobo ziyahlolwa, zigcinwe, zihlala, kwaye ziqhutywe ngokuhambelana nemimiselo esebenzayo kunye nemigangatho eyamkelekileyo yokukhusela umlilo kunye nokukhuseleka.
Ukunika abasebenzi bethu olona khuseleko lubalaseleyo, i-EPP iazise imigaqo engqongqo kukhuseleko lwempilo, ukhuseleko emsebenzini kunye nokusetyenziswa kwezixhobo zokuzikhusela (PPEs). Sisebenzisa impendulo efanelekileyo kwizifo kunye nokwenzakala emsebenzini.
Sizimisele ukufezekisa ukugqwesa ekuqhubeni iindlela ezivakala kokusingqongileyo ekwenziweni kwethu kokupakisha okuguqukayo. I-EPP ineNkqubo yoLawulo lokusiNgqongileyo (ISO 14001: 2004) ekhoyo. Iinjongo zethu ze-EHS kwiimpembelelo zokusingqongileyo eziphambili zihambelana nokukhutshwa kwindawo yethu, ukusetyenziswa kwemithombo yendalo, ukukhutshwa kwendalo kunye nenkunkuma ekugcwaliseni umhlaba. Imeko yenkampani igcinwa ngokuthobela yonke imigaqo esebenzayo kunye nemithetho. Isalathiso somgangatho womoya (AQI) sikwiqela elonelisayo elisetyenziswa ziiarhente zikarhulumente. Ngaphezulu kwesibini kwisithathu sendawo yethu sigutyungelwe ziintyatyambo eziluhlaza.
Umgaqo-nkqubo we-EPP wokusiNgqongileyo, weMpilo noKhuseleko
Sizimisele ukuqhuba imisebenzi yethu yeshishini sithathela ingqalelo okusingqongileyo, iMpilo noKhuseleko njengenxalenye ebalulekileyo ngokwenza njalo:
● Siza kuthintela ukwenzakala, impilo enkenenkene kunye nongcoliseko kubasebenzi nakuluntu lwethu ngokwenza izinto ngendlela ekhuselekileyo.
● Siya kuhambelana neemfuno zomthetho nezomthetho ezinxulumene neengozi ze-EHS.
● Siza kubeka iinjongo kunye neethagethi ezingqinisisekayo ze-EHS, size siziphonononge ngamaxesha athile, ukwenza uphuculo oluqhubekayo ekusebenzeni kombutho we-EHS.
● Siza kubandakanya sibaqeqeshe abasebenzi bethu, nabanye abantu esisebenzisana nabo, ukuze baxhamle ekuphuculeni indlela yokusebenza kwe-EHS yombutho.